ရရှိနိုင် Opera 11.60 | Linux မှ
ရရှိနိုင် Opera 11.60
မဟုတ်ပါဘူး ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်, ဒါပေမယ့်သူကမြန်ဆန်လှတယ်တော်တော်အခမဲ့နှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ တေးသံစုံကဇါတ် နောက်ကွယ်မှာရပ် Chrome ကို နှင့်များ၏ရှေ့မှောက်၌ Safari ဥယျာဉ်ကိုလည်း အသုံးပြုသူအရေအတွက်, စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မြန်နှုန်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌။
ဒီဗားရှင်းရှိသတင်းများသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည် (တရားဝင် site မှယူ):
အသစ်ပြန်လည်စတီယာရင်ဘား: လိပ်စာဘားသည်ရှာဖွေခြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအသစ်ဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းခံရပြီးရလဒ်စာရင်းတွင်သင်အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုပိုမိုလျှင်မြန်စွာရှာဖွေနိုင်သည်။ စာမျက်နှာများကို Bookmark (သို့) မြန်ဆန်စွာချက်ချင်းဖုန်းခေါ်ဆိုပါကလိပ်စာနေရာရှိကြယ်ကိုသာနှိပ်ပါ။
rendering engine အသစ် အော်ပရာ 11.60 ပိုမိုမြန်ဆန်။ တည်ငြိမ်သောအင်တာနက်အတွေ့အကြုံကိုပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် rendering အင်ဂျင်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ဆိုင်ရာလိုက်ဖက်မှု၊ ပိုမြန်သောစာမျက်နှာတင်ခြင်းနှင့် browsing လုပ်သည့်အခါတွင်တည်ငြိမ်မှုမြင့်မားခြင်းကိုခံစားပါ။
မေးလ်သုံးစွဲသူအတွက်ဒီဇိုင်းအသစ် browser ၏ built-in email client တေးသံစုံကဇါတ် သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျများကိုအလိုအလျောက်စီမံခွင့်ပြုသည် In အော်ပရာ 11.60ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော layout အပြင်အဆင်၊ message grouping၊ သင်၏ inbox အပေါ်ပိုမိုအလိုအလျောက်မြင်တွေ့နိုင်ခြင်းနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူသော navigation တို့ပါဝင်သည်။
ဤအပြောင်းအလဲများအပြင်ထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည် ECMAScript ၅.၁ y XMLHttp တောင်းဆိုချက် အဆင့် 2, အပြည့်အဝထောက်ခံမှု radial-gradient ကို y ထပ်ခါတလဲလဲ - radial-gradient ကို de CSS3, အဘို့ CSS3 ကောင်းတယ် SVG။ အသစ်အဆန်းတစ်ခုအနေနှင့်၎င်းတွင်အချို့သောအင်္ဂါရပ်များအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပါဝင်သည် CSS4.
အထူးသဖြင့်ငါမကြိုက်ဘူးသောအရာကို တေးသံစုံကဇါတ် အဲဒါကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်၎င်း၏မြင့်မားသောစားသုံးမှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်မြန်ပြီး cache ကိုအခြား browser များကဲ့သို့ကိုင်တွယ်သည်။
ထင်တာပဲ တေးသံစုံကဇါတ် ၎င်းသည်ပထမဆုံးအသုံးပြုသော browser များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်၎င်းကိုပိတ်ထားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းင်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုရယူသုံးစွဲနိုင်လျှင်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောတိုးတက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ပိုမိုမြန်ဆန်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဒါပေမယ့်နော်ဝေကုမ္ပဏီကဒီလိုမလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတာငါမသိဘူး။ သူတို့မှာဝှက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုခုရနိုင်မလား။ ငါတို့မသိဘူး။
၎င်းမှကူးယူနိုင်သည် ဒီ link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » ရရှိနိုင် Opera 11.60
၎င်းသည် Open Source မဟုတ်သော်လည်းအခမဲ့၊ လှပပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။
1- သင်တစ် ဦး ရန်ပွဲချင်ပါသလား သငျသညျဆိုပါက purists အညိုရောင်တက်ရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မယ်
အခမဲ့ - အခမဲ့လား။
ဟဟဟဟဂျာဂျာ၊ သင်ကလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ် !!!
ယင်းအစားလေးလံသော is ဖြစ်သည်
ထို avatar, သင်မည်သို့လိုက်ရှာနေကြသနည်း မင်္ဂလာပါ။
အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရအပြောအရကျွန်ုပ်၌ Avatar ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့မင်းလမ်းလျှောက်ဖို့ ..
Elav 1 ရဲစွမ်းသတ္တိ 0
အဲဒါကိုကျွန်တော် install လုပ်ပြီးသားမကောင်းဘူး၊ တချို့စာမျက်နှာတွေကကောင်းကောင်းမကောင်းဘူး၊ မှတ်ဥာဏ်အသုံးပြုမှုမှာ ၂၁၄.၄ Mb ရှိပြီး Tabs ၄ ခုသာဖွင့်တယ်။
Opera သည်ပထမဆုံးအသုံးပြုသော browser (ဘရောက်ဆာ) များထဲမှတစ်ခုမဟုတ်လျှင်၎င်းသည်ပိတ်လိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ငါသည်လည်းအတူတူထင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆန့်ကျင်ဖြစ်ပါသည်, "အကျိုးကျေးဇူးများ" ၎င်းတွင် Opera Firefox ပျောက်နေပြီးကျန်ရှိသောအရာလည်းကျန်ပါသေးသည် "မီးမြေခွေးလေး" အော်ပရာကင်းမဲ့သည်။ ငါနှစ် ဦး စလုံးစီမံကိန်းများဖြစ်နိုင်ခြေရှိခဲ့လျှင်ထင်ပါတယ် "အတူတူအတူတူ" လူတိုင်းအတွက်အတော်လေးအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်
ပထမဆုံးမင်းရဲ့စာမျက်နှာကိုမင်းကိုချီးကျူးချင်တာကလွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်တုန်းကငါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့အရမ်းကောင်းတဲ့အရည်အသွေးပဲ။ သတင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ အော်ပရာပြခြင်းမှာကျွန်ုပ်သည်ဗားရှင်း ၁၁.၅၁ နှင့်အတူလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ် Fedora ကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီး tabs ၆ ခုထက်ပိုသောဖွင့်လှစ်ထားသည့်သိုးထည်စားသုံးမှုသည် ၆၀၀ မီဂါဝပ်ကျော်အထိရှိနိုင်သည်၊ ငါ့မှာအိမ်မှာ 16gb ပဲရှိတယ် .. ဒါကဗားရှင်း ၁၁.၅၀ နဲ့မတူခဲ့ဘူး၊ ဘာတွေပြောင်းလဲခဲ့လဲဆိုတာငါမသိဘူး။ ငါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါ ၁၁.၆၀ ကိုကြိုးစားမယ်။
Miguel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကြိုဆိုပါတယ်
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည် Opera Next (v12) ကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး၎င်းတွင်ဤသုံးစွဲမှုလုံးဝမရှိခဲ့ပါ။ Opera မှသုံးစွဲသော 600MB သို့ရောက်ရန်ကျွန်ုပ်သည် tab (၁၀) ခန့်ကိုဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
အားနည်းချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့မင်းက browsing လုပ်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် tabs များဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ခြင်းကနေခဏသွားရင် RAM ထဲမှာတစ်ခုခု "loaded" ဖြစ်နေပြီးသင်ဒီမှာတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင် Opera နဲ့ RAM 3MB ကျော်စားသုံးတဲ့ Tab (၃) ခုသာရှိလိမ့်မယ်။
ဟုတ်တယ်ငါသဘောတူတယ် ထူးဆန်းတာကအရင်ဗားရှင်းတွေနဲ့မဖြစ်ခဲ့ဘူး ... ဒါပေမယ့်ဟေး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့် pc မှာရှိတဲ့ nouveau driver နဲ့ webkit-based browsers တွေပေါ်မှာစာမျက်နှာတွေ scrolling အရမ်းနှေးနေပြီး firefox မှာနည်းနည်းပိုမြန်လို့ Opera ကိုသုံးတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကဒ်ကို nvidia drivers မှမထောက်ပံ့ပါ။ Scrolling သည်အော်ပရာနှင့်အတူကျွန်ုပ်အတွက်အတော်အတန်ကောင်းမွန်သည်။
ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုသည်အလွန်စပ်စုသည်၊ ငါကအနည်းဆုံး Chakra တွင်သုံးသည်။ tabs ၁၀ ခုကျော်ဖွင့်လိုက်သောအခါ၎င်းသည် ၁၈၀ megabytes ထက် ကျော်လွန်၍ 180 Gb memory သာရှိသည်။
ကောင်းပြီ၊ အိမ်မှာ ၁၁.၅၁ ကိုငါ uninstall လုပ်လိုက်တယ်၊ settings folders တွေကိုဖျက်လိုက်ပြီးဗားရှင်းအသစ်ကို install လုပ်တယ်။ ၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီးအလွန်အမင်းမှတ်ဥာဏ်သုံးစွဲမှုပျောက်ကွယ်သွားသည်၊ သို့သော်ကံမကောင်းစွာဖြင့် browser သည် ၅ မိနစ်မှ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်ပိတ်သွားသည်။ အခြား distros များမှလူတစ်ယောက်ထပ်တူဖြစ်လိမ့်မည်မထင်သော်လည်းအနည်းဆုံး Fedora 11.51 တွင်အဆင်ပြေပါသည်။ အကြောင်းရင်းကိုရှာရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ Firefox ကို ...
ငါအရမ်း Opera ကိုကြိုက်တယ်၊ အရမ်း Pro လိုချင်တယ်။
ငါ၏အ Fav အော်ပရာနှင့် Chrome
flash နှင့် html5 နှစ်ခုစလုံးကို kde နှင့်အော်ပရာပြုတ်ခြင်းတွင်တွေ့ရသည်။
အမျိုးမျိုးသော distros များအတွက် packet ကိုရှာပါ
Pidgin's tray အတွက်အကောင်းဆုံးသင်္ကေတများ